Ac Milan Oo Dagsatay Qorsh Ay Man United Uga Helayo Xiddiga Khadka Dhexe Ee Ander Herrera – Kooxda.com
Home 2018 February Italy, Wararka Maanta Ac Milan Oo Dagsatay Qorsh Ay Man United Uga Helayo Xiddiga Khadka Dhexe Ee Ander Herrera
Ac Milan Oo Dagsatay Qorsh Ay Man United Uga Helayo Xiddiga Khadka Dhexe Ee Ander Herrera
February 10, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Ander Herrera ayaa bartilmaameed u ahaa kooxda reer Talyaani ee AC Milan iyagoo doonaya inay u soo bandhigaan xiddiga reer Spain fursad uu si joogto ah ugu ciyaari karo kubada cagta.
Herrera ayaa Manchester United kaga soo biiray kooxda Athletic Bilbao sanadka 2014-ka £ 28m, waxaana uu u saftay 151 kulan isagoo u dhaliyay 16 gool.
Asal ahaan, Herrera ayaa loo isticmaalay qadka dhexe ee United markii uu Jose Mourinho ku soo biiray kooxda Man United sanadkii 2016.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaaryahanka reer Spain ayaa haatan ka dambeeya xiddiga Nemanja Matic kaas oo kooxda ku soo biiray xagaagii waxana uu arkaa in ay fursadiisu sii yaraanayso.
AC Milan ayaa diyaar u ah in ay 28 jirkan ka bixiso kaydka Man United isaga oo isku dayi doona in ay xagaaga keenaan San Siro waxaana ay u direen indha-indheeyayaal si ay ula socdaan horumarkiisa Old Trafford, sida laga soo xigtay Tuttosport.
Milan ayaa dooneysa inay xoojiso qadkeeda khadka dhexe islamarkaana kooxda keento xiddigo la tartama xiddigaha khadka dhexe haatan uga ciyaara ee Lucas Biglia iyo Riccardo Montolivo waxana ay doonayaan in ay sii wadaan kharash garayntooda iyaga oo xagaagii 150 milyan suuqa galiyay.
Ac Milan ayaa diyaar u ah in ay dhamaadka xilli ciyaareedkan dalab lacageed oo dhan 35 milyan oo euro ka dudbiso adeega xiddiga reer Spain.
Filed in: Italy, Wararka Maanta